तौल बढेर चिन्तित हुनुहुन्छ? अपनाउनुहोस् यी उपाय – email khabar | Latest news of Nepal
प्रकाशित : २०७३ पुष २४ गते १:५७
काठमाडौं– आजभोलि हाम्रो दैनिकी धेरै व्यस्त हुन थालेको छ। व्यस्तताले विभिन्न शारिरीक समस्या निम्ताउँदै गएको छ। यसमा पनि मुख्य समस्या मोटोपना भएको छ। व्यस्त जीवनशैली र खानपीनमा हेरविचार नपुर्‍याएकाले मोटोपना डरलाग्दो समस्या भएर आएको छ। मोटोपना नै विभिन्न रोगको खानी र कारक पनि बनेको छ।
१ कागती र मह खाने
जति बढी हिडिन्छ, उति बढी शरीरको क्यालोरी खर्च हुन्छ। बिहानको स्वच्छ हावामा कम्तिमा ५ किलोमिटर जति हिड्ने। लिफ्टको ठाँउमा सिँढीको प्रयोग गर्ने, नजिकै जानपर्ने भए पैदल जाने।अरू कहीँ सकिन्न भने पनि कमसेकम दिनको एक दुईपटक घरको भर्‍याङ चढ्ने-ओर्लने वा छतको चक्कर मार्ने। दैनिक ३० मिनेट हिड्यो भने तपाईंको शरीरमा तौल बढ्न पाउँदैंन। यदि तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि ४५ मिनेट हिड्नुहोस्। यसो गर्ने हो भने खानपानमा परिवर्तन नल्याइकन तौल घटाउन सक्नुहुनेछ।
खाजाको बेला सुन्तलाको रस, चिया, दूध खानु राम्रो हुन्छ। तर, त्यसपछि तरल पदार्थकोरूपमा दिनभर पानीमात्र खानुहोस्। कोल्ड ड्रिंक नखानुहोस् र खाजापछि सकेसम्म चिया/कफी नखानुहोस्। यसबाट तपाईंले दैनिक करिब २ सय ५० क्यालोरी कम गर्नु सक्नुहुनेछ ।
एक अध्ययनका अनुसार बिहान, दिउँसो, बेलुकी खानुको सट्टा दिनको ५–६ पटक तर थोरै-थोरै खाना खाने मानिसले ३० प्रतिशत कम क्यालोरी उपभोग गर्छ। दक्षिण अफ्रिकामा भएको अध्ययनअनुसार दिनको धेरैपटक खाँदा शरीरले कम इन्सुलिन निकाल्छ जसले ब्लड सुगरलाई सही राख्छ र भोक पनि कम लाग्छ।
जति भोक लागे पनि यदि तपाईँको अगाडि धेरै खाना छ भने धेरै खाइन्छ। अर्थात् भएको सकाउनै पर्छ, फाल्न हुन्न भनेर सकाउन तिर लागिन्छ। थोरै खाना राखिएको छ भने, थोरै खाइन्छ। त्यसैले कम खाना खान सानो थालमा थोरै खाना राखेरै खानु उपयुक्त हुनेछ। चिया/कफीका लागि पनि सानो कप नै प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने एक अध्ययनले देखाएको छ।
तपाईंले सकेसम्म घरमै खाने बानी राख्नु भयो भने स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। होटल/रेष्टुरेन्टको खानामा चिल्लो पदार्थ र क्यालोरी बढी हुन्छ, यसबाट बच्नुपर्छ। त्यस्तै सोडापानी पिउन कम गर्नुहोस्। फ्याटयूक्त पेयपदार्थ तथा आइसक्रिम खान छोड्नुहोस्। यस्तै गुलिया, प्याकिङ्ग गरिएका, फ्रोजन, तेलमा फ्राई गरिएका खाना कम खानुहोस्। बजारमा पाईने बट्टाका जा अन्य फलफूल जुसको सट्टा ताजा फलफूलको खानुहोस्। खानामा सलाद बढी प्रयोग गर्नुहोस् र चिनीको मात्रा कम गर्नुहोस्।
हप्तामा कम्तीमा पनि एकपटक गर्‍हौं काम गर्नुहोस्। जस्तो कि आफ्नो बाइक वा कार आफैं धुने। बच्चाको साथमा घुम्न जाने वा आफ्नो जीवनसाथीलाई घरको काममा सहयोग गर्ने। घर बढार्ने, आँगन, बाटो, सफा गर्ने र बँगैचा/बारी भएमा गोडमेल पनि गर्न सकिन्छ।
१२. नाच्ने/ पौडने
तपाईंको हरेक हिडाईंको गन्ति गर्न ‘पेडोमिटर’ प्रयोग गर्नुहोस्। यसलाई आफ्नो बेल्टमा लगाउन सकिन्छ र हरेक बिहान १ हजार पाइला थप चाल्न प्रयास गर्नुहोस्। अधिक तौल भएको मानिसले दिनभरमा दुईदेखि तीन हजार पाइलामात्र चाल्न सक्छन्। यदि यसमा २ हजार पाइला बढी चाल्यो भने तौललाई स्थिर राख्न सकिन्छ ।